महिलाहरु र पुरुषहरु लाई यो अलग तरिकाले भन्दछ, पहिलो को राय मा, यो upbringing छ, जबकि पछि यो मस्तिष्क, अनुहार, आदि को एक बाहिर लाग्ने विचार कमजोर सेक्सको प्रतिनिधिहरूको अनुसार, तिनीहरू सबैले सम्बन्धको राम्रो लागि गर्छन्, र कसैलाई हानिकारक बनाउन वा मायालु व्यक्तिलाई अपमानित गर्दैनन्। यस समस्यालाई पूर्णतया बुझ्न को लागी, यो दुवै पक्षको विचार सुन्न आवश्यक छ।
कडा सेक्सको लगभग हरेक सदस्यको लागि, सबै उपन्यासहरू एउटै परिदृश्य अनुसार विकसित हुन्छन्। सुरुमा, सबै कुरा एक परी कथा जस्तो देखिन्छ। रोमान्स , प्रेम, एक नायक जस्तो महसुस हुन्छ, तर त्यस सम्बन्ध एक नयाँ स्तरमा जान्छ र तपाईले पहिले नै साधारण जीवनको दोस्रो भाग साझा गर्नुहुनेछ। यो रमाइलो हुन्छ। केही कारणको लागि, एक जना व्यक्तिले यति सुन्दर प्रेमको प्राणीमा परिणत गर्छ, जुन यस जीवनमा कुनै पनि चीज छैन। सामान्यमा, त्यसो भए कि एक मानिसले यसलाई गर्दैन, त्यो अझै पनि केहि कुराको दोषी हुनेछ, र यो जीवन बिताउन निकै गाह्रो छ, र यो असहनीय छ। उदाहरणका लागि, उदाहरणका लागि, एक धेरै सामान्य परिस्थिति हो: "एक महिलाले डिनर तयार पार्छ र एक जना मायालु एक जडी बूटी किन्न सोध्छ, र उहाँले सधैं बिर्सन्छ। घोटालाको परिणामको रूपमा, उहाँले सुपरमार्केटमा सुधार गर्नुहुन्छ र प्रशंसाका शब्दहरू सुन्नुको आशामा अशुद्धताको ठूलो कुख्यात ल्याउनुहुन्छ। तर बरु, ढोकाबाट प्रियले सोध्छन्, र रोटी किन्न सकेन, किनकि उसले थाहा पाएको थियो कि त्यो समाप्त भयो। " यस्तो क्षणमा, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो प्रेमीको अनुहारमा यो ग्रीस फेंक गर्न विस्फोट गर्न चाहन्छ र छोड्दछ। यो तिनीहरूको लागि हो र मस्तिष्क को हेरविचार र हटाउदै छ।
सबै दोष एकअर्काको सामान्य गलतफ्ल्यान्डिङ हो। केही कारणको लागि, धेरै महिलाहरूले सोचेका छन् कि पुरुषहरूले बाबाको लागि सबै कुरा गर्छन, उदाहरणका लागि, केहि किन्न बिर्सनु, आफ्नो जन्मदिनमा आफ्नो काटीलाई बधाई दिनुहोस्, एक पार्सलका लागि कल गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिको मनमा के हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ, र मानिस अपवाद छैन, एकदम धेरै जानकारी र दिमाग कहिलेकाहीं अति नैतिक छ कि तपाईं आफ्नो नाम सम्झन सक्नुहुन्न। यसकारण, सबै प्रकारको प्रलोभन र घोटालाबाट बच्न, केवल आफ्नो प्रियलाई फेरि के गर्न आवश्यक छ भनेर सम्झाउनुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ कुनै काटिने छैन।
सायद, धेरै महिलाहरूको लागि यो एक वास्तविक समस्या हो, किनकि उनीहरूले यसो भन्न सक्छन्: "तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न, सबै मानिसहरु मानिस जस्तै छन् र तिमी निर्दोष छौ। तपाईंको लागि हरेक दिन म सबको सम्भव छ र असम्भव छ ... ", सामान्यतया सबै भन्दा सामान्य वाक्यको साथ यो प्रतिस्थापित गर्नुको सट्टा:" कचौरा निकाल्नुहोस् "। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, कुनै व्यक्ति अनुरोध बुझ्न सक्नेछैन भने, यदि तपाईंले पहिलो संस्करणको रूपमा सबै कुरा भन्नुहुन्छ, त्यसोभए कसरी आफ्नो विचार स्पष्ट र स्पष्ट कसरी व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
एक मायालु व्यक्तिले सधैं आफ्नो महिलाको अनुरोध पूरा गर्छ, निस्सन्देह, यदि उनि कारण भित्र छन्। तर जब तपाईंको इच्छा हरेक आधा घण्टामा परिवर्तन गर्दछ, उदाहरणका लागि, यो गर्नुहोस्, होइन, नगर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्। एक मान्छे को रूप मा देख्न को लागी मानिन्छ र त्यो निश्चित रूप देखि भन्न चाहेंगे कि तपाईं के चाहानुहुन्छ। यसकारण, तपाइँले केहि सोध्नु अघि स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्नुहोला र तपाई मात्र आफ्नो विचारलाई बताउनुहुन्छ।
फरक हुन सिक्दै
यदि तपाईलाई यी सबै इच्छाहरू राख्नुहुन्छ र एक बुद्धिमानी स्त्री जस्तै व्यवहार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, यसको लागि कटौती गर्न केहि छैन। बलियो सेक्स, बेशक, धेरै भन्दा सक्षम छ, तर केवल विचारहरू पढ्न नदिने, त्यसैले यदि तपाईलाई केहि चाहनुहुन्छ भने, उनी अनुमान गर्दछन् भन्ने आशा नगर्ने, तर केवल त्यहि भन्नुहुन्छ। यसकारण, तपाईं तिनमा निराश हुनुहुने छैन, र उहाँले आफ्नो दिमाग रैक गर्न र तपाईंको "पीडा भएको होंठ" को कारण के हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्दैन। यस्तो प्रतिभा छ जो एक महिला अमूल्य हो, एक पुरुष तपाईं आफ्नो हातमा लैजान र सबै आवश्यकताहरु र इच्छाहरु पूरा गर्न तयार हुनेछ।
कसरी चुम्बन संग एक मान्छे उत्तेजित गर्दछ?
एक व्यक्तिलाई कसरी प्रेम गर्ने?
पारिवारिक जीवन कसरी विविधीकरण गर्ने?
कसरी आकर्षक छ केटा?
Esophagus को स्पेस
हिप संयुक्त उपचार को Osteoarthritis
एक mantovarka मा manti कसरि पकाने?
फैशनेबल बालबालिका 2015
Beyonce र Jay Zee तलाकको बाहेक एक संयुक्त आरामको आनन्द लिन्छन्
स्पाइडरमैन मुखौटा कसरी गर्ने?
यो बिरालो लगभग2किलो यसको आफ्नै उलङ्गित बालको कारणले मरेको थियो!
राजाको दुखी छोरी: पेरिस जैक्सनको विकास
नीलो मिलानले के गर्छ?
गर्भावस्थामा ठूलो पेट
Xenia Borodina 2015 को रूपमा कपाल रङ
आफ्नो हातले पजामा कसरी सिलाई दिनुहुन्छ?
14 वर्षीया छोरी छोरी सिन्ड क्रोर्डफोर्ड क्रोम हार्टको अनुहार भयो
एक फोटो शूट को लागि हेयर स्टाइल
कसरी वजन खोने सुरु गर्ने हो?
तपाईंको हातमा कसरी खडा हुन सिक्नु हुन्छ?